#ခရူစူးကားတိုင်အောင်နိုင်ခြင်းပွဲနေ့ The Exaltation of the Holy Cross | Radio Veritas Asia
#ခရူစူးကားတိုင်အောင်နိုင်ခြင်းပွဲနေ့ The Exaltation of the Holy Cross
#ခရူစူးကားတိုင်အောင်နိုင်ခြင်းပွဲနေ့ Sept 14. 2021
ခရူစူးကားတိုင်အောင်နိုင်ခြင်းပွဲ ဆိုတာဟာ သခင်ယေဇူးရဲ့ အသေခံခဲ့တဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ဂုဏ်ပြုကျင်းပခြင်းဖြစ်သလို သန့်ရှင်း စစ်မှန်တဲ့ ခရူစူးကားတိုင်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ချီးမြှောက်ခြင်းပွဲနေ့ အထိမ်းအမှတ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ယေဇူးရဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင် (သေခြင်းကို) အောင်မြင်တော်မူခြင်းပွဲနေ့နဲ့ လူသားတွေကို ကယ်တင်ခြင်းပွဲနေ့ကို ချီးမြှောက်ခြင်း Holy Cross Day သန့်ရှင်းသော ခရူစူးကားတိုင် (လက်ဝါးကပ်တိုင်) ပွဲနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
The Feast of the Exaltation of the Holy Cross သန့်ရှင်းသော ခရူစူးကားတိုင် အောင်နိုင်ခြင်း ပွဲနေ့ကို နှစ်စဥ် စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခြင်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်း (၃)ခု ရှိပါတယ်။ ပထမအနေနဲ့ The mother of the emperor Constantine ကွန်စတန့်တင် (ဧကရာဇ်) ရှင်ဘုရင်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်တဲ့ စိန့်ဟယ်လင်နား Saint Helena ကနေ စစ်မှန်တဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကတော့ ရှင်ဘုရင် ကွန်စတန့်တင် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Holy Sepulchre နဲ့ ကာဝါရီတောင်ပေါ် Mount Calvary က ဘုရားကျောင်းတွေကို ပူဇော်အပ်နှံခြင်း ပွဲ‌နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ရှင်ဘုရင် (ဧကရာဇ် ဟဲရာဂလီအုစ် -၂) Heraclius II ကနေ စစ်မှန်တဲ့ ခရူစူးကားတိုင်ကို ဂျေရုဆလင်မြို့မှာ ပြန်လည် ထူထောင်ခြင်းပွဲ‌နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် အထူးနက်ရှိုင်းတဲ့ သန့်ရှင်းသော ခရူစူးကားတိုင် ပွဲနေ့ကို ကျင်းပခြင်းအားဖြင့် ခရူစူးကားတိုင်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခြင်းပေးတဲ့ ပွဲနေ့မြတ်ကို ကျင်းပနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲနေ့ကို ရိုမန်ကက်သလစ်၊ အရှေ့သြသဒေါက်စ်နဲ့ အင်္ဂလီကန် ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ကျင်းပကြပြီး တခြားနှစ်ခြင်း အသင်းဂိုဏ်းတွေမှာ မကျင်းပ ကြပါဘူး။
ပရိုတက်စတင့် (နှစ်ခြင်းအသင်းတော်) တွေမှာ ဘာကြောင့် အဲဒီပွဲနေ့ကို မကျင်းပ ကြတာလဲ။ အဓိကအားဖြင့် လူတွေဟာ ဘုရားသခင်အစား ပုံရိပ်ကိုပဲ ရှိခိုးမှာ ကြောက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကက်သလစ် အသင်းတော်မှာလည်း ပုံရိပ် ရှိခိုးကိုးကွယ်သူ မရှိပါဘူး။ ဘုရားသခင်ကို ဘယ်သူမှ မမြင်ဖူးတာကြောင့် သိကြားတမန်တွေနဲ့ ရဟန္တာတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေ အားဖြင့် ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်နေပြီးသား ရဟန္တာတွေကို ကိုးစားကာ သူတို့ဆီကနေ တဆင့် ဘုရားသခင်ဆီကို ဆုတောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကက်သလစ် အသင်းတော်မှာ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို မသုံးဘဲ ခရူစူးကားတိုင်ကို အသုံးပြုတာ ဖြစ်တယ်။ ဘုရားစင်စစ်၊ လူစင်စစ်ဖြစ်တဲ့ သခင်ယေဇူးဟာ နှိမ့်ချစွာနဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံပြီး သေခြင်းကို အောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း သခင်ယေဇူး ကိုယ်တိုင် လူတွေကို ကယ်တင်ဖို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ခရူစူးကားတိုင်ရဲ့ အောင်နိုင်ခြင်း ပွဲနေ့ထူးကို ကျင်းပကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရူစူးကားတိုင်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် (သခင်ယေဇူး)တွဲလျက် ရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင် အပေါ်မှာ သခင်ယေဇူး ခန္ဓာကိုယ်ပုံ ပါတဲ့ဟာကို ခရူစူးကားတိုင် လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လက်ဝါးကပ်တိုင် သီးသန့် မဟုတ်ပါဘူး။ A crucifix (from Latin cruci fixus meaning "(one) fixed toacross") is an image of Jesus on the cross, as distinct fromabare cross.
အဲဒါကြောင့် ပရိုတက်စတင့်ကနေ ကက်သလစ်တွေကို ဘာကြောင့် ခရူစူးကားတိုင်ကိုပဲ အသုံးပြုတာလဲ မေးလာခဲ့ရင် အဖြေ (၂)ခုပဲ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ကက်သလစ်တွေက လက်ဝါးကပ်တိုင်နဲ့ သခင်ယေဇူးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သီးသန့် မခွဲခြားထားပါဘူး။ သခင်ယေဇူးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပါတဲ့ ခရူစူးကားတိုင်ကိုပဲ အသုံးပြု ပါတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းရဲ့ သင်္ကေတ ခရူစူးကားတိုင်ရ။
တမန်တော် ရှင်ပေါလ်လု မိန့်ထားသည့်အတိုင်း "ငါတို့၏ သခင်ယေဇူး ခရစ်တော်၏ လက်ဝါးကပ်တိုင် မှလွဲ၍ ငါ၌ အခြားဝါကြွားစရာ အကြောင်း မရှိပါစေနှင့်။ ထိုလက်ဝါးကပ်တိုင် တော်အားဖြင့် ကမ္ဘာလောကသည် ငါ၌ လက်ဝါးကပ်တိုင်တင် ခံရသကဲ့သို့ ငါသည်လည်း ကမ္ဘာလောက၌ လက်ဝါးကပ်တိုင် တင်ခြင်းကို ခံရလေပြီး။” (ဂလာတိ ၆း ၁၄)။ May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. (Galatians 6:14).
ခရူစူးကားတိုင်က ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကယ်တင်ခြင်းကို အောက်မေ့ သတိရစေပြီး လောကမှာ ကြုံတွေ့ရသမျှ ဆင်းရဲ ဒုက္ခတွေ အားလုံးကို သခင်ယေဇူးရဲ့ ဒုက္ခစရိယာနဲ့ ပေါင်းစပ်ကာ ဝိညာဥ်အာဟာရ ခွန်အားယူ အသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့် ခရူစူးကားတိုင် အောင်နိုင်တော်မူခြင်းကို ကျင်းပကြပါစို့။
ထန်းဟာ, SJ (14.09.2021)
ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၂၉) ကြိမ်မြောက် သာမာန်တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ၊ ၂၀၂၁
ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း (၂၈) ကြိမ်မြောက် သာမာန်တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ၊ ၂၀၂၁
ဖာသာရ် ဂျော့ရွှေထွန် (၂၇) ကြိမ်မြောက် သာမာန်တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၃ ၊ ၂၀၂၁
Christian Angelology ခရစ်ယာန် သိကြားတမန်အကြောင်း